Peji yekumba ― Leetags - Instagram Hashtags
Hashtags jenareta yeAtuppie Caption
Wana vateveri vazhinji uye zvavanofarira pa Instagram.
Chii chinonzi hashtag?
Mahashtag ndeye seti yemazwi akakosheswa neiyo hash chiratidzo iyo inonyanya kushandiswa kurondedzera zviri mukati mekutumira uye ichirondedzera kune zvimwe zvinzvimbo zvine zvakafanana. Kana hashtag yakashandiswa mupositi, iyo post ichave yakabatana nevamwe vane iyo yakafanana hashtag.
Leetags inoshanda sei?
Kuti uwane ma hashtag ane maitiro anongonyora rimwechete kana akawanda mazwi ane chekuita nepositi yako mumunda wekutsvaga pasina pimisheni uye akapatsanurwa nenzvimbo dzakareruka. Iyo App zvakare ine mhando dzakasiyana kuitira kuti uenderere mberi nekutsvaga kwako. Mune ino kesi iwe unofanirwa kuwana iyo zvinyorwa zvemapoka kuburikidza nechepasi menyu yeapp, ipapo tsvaga iyo chikamu uye chikamu chidimbu chinonyanya kuenderana nekutumira kwako. Tsvagiridzo dzekutsvaga dzichakonzera rondedzero yeiyo hashtag ine hukama. Imwe neimwe hashtag mukupindurwa inoteverwa nehuwandu hwezvinyorwa umo mairi yakashandiswa uye kukosha kwayo, zvichiita kuti zvive nyore kusarudza.
Mashandisiro ekushandisa hashtags pa Instagram?
Masocial network anopatsanura maposita nema hashtags avanawo. Leetags ine yakagadzirirwa kutsvaga munguva chaiyo iyo inokupa iwe yakanyanya kushandiswa hashtag munyika. Izvi zvinokutendera kuti ubatanidze mabhuku ako neanonyanya kutaridzwa uye anodiwa mumamiriro epasirese.
Nzira yekuwana sei vateveri uye zvavanofarira pa Instagram?
Uchishandisa Leetags iwe unogona kuvandudza zvinyorwa zve Instagram nemahara ane maitiro, kuwedzera uwandu hwekutarisa uye zvavanofarira uye zvakare kuwana vateveri vakawanda.
Maitiro ekuvandudza bhizinesi rako pa Instagram?
NeLeetags iwe une ma hashtag makuru ane chekuita nechigadzirwa chako kana sevhisi, kuwedzera kukosha kwezvekutumira uye yako nhoroondo uye, zvichidaro, ichiita kuti bhizinesi rako rizivikanwe.
InstagramTwitterFacebookEmailCookies PolicyYakavanzika Policy© 2020 Leetags.